T I6နောက် ပိုင်း ပ ထ မ ဆုံး အ ကြိမ် အ ဖြစ် T I ၀င် ခွင့် ပြန် ရ ခဲ့ တဲ့ Na' V i - Real Gaming Myanmar
T I6နောက် ပိုင်း ပ ထ မ ဆုံး အ ကြိမ် အ ဖြစ် T I ၀င် ခွင့် ပြန် ရ ခဲ့ တဲ့ Na‘ V i
By Realman /2weeks ago / Up to Date News / No Comments
ပ ထ မ ဆုံး စ တင် ကျင်း ပ ခဲ့ တဲ့ T I 1 မှာ ချန် ပီ ယံ ဖြစ် ခဲ့ ပြီး T I2နဲ့ T I3တို့ မှာ လည်း ဗိုလ် လု ပွဲ ထပ် တက် နိင် ခဲ့ လို့ သ မိုင်း ကြောင်း အ စဉ် အ လာ ကြီး မား ခဲ့ တဲ့ Na‘ V i တို့ ဟာ T I6အ ပြီး မှာ တော့ အ မှောင် ဖုံး ခဲ့ ပါ တယ် ။
ကျ ဆင်း ခဲ့ တာ က တော့ T I4က တည်း က ဖြစ် ပေ မယ့် ဆင် ပိန် ကျွဲ လောက် တော့ ကျန် နေ သေး တဲ့ အ နေ အ ထား တွေ က နေ တ ဖြေး ဖြေး နဲ့ လုံး ပါး ပါး လာ ခဲ့ ပြီး T I6အ ပြီး မှာ တော့ T I ၀င် ခွင့် ပါ မ ရ တော့ တဲ့ အ ထိ ဆိုး ရွား သွား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဒါ ပေ မယ့် လည်း Na’ V i ရဲ့ ကျ ဆင်း မှု တွေ က မ ရပ် တန့် သွား ခဲ့ ပဲ T I7မှာ Reg i o nal Q ual ifier တော့ ရောက် ခဲ့ သေး တဲ့ အ နေ အ ထား က နေ T I 8 မှာ တော့ Reg i o nal Q ual ifier တောင် ရောက် မ လာ ခဲ့ တော့ ပါ ဘူး ။
ဒါ့ ကြောင့် အ သင်း ရဲ့သက် တော် ရှည် က စား သ မား လည်း ဖြစ် သ လို ရွှေ ခေတ် ရဲ့ နောက် ဆုံး လက် ကျန် က စား သ မား ဖြစ် တဲ့ Dendi ကို ပါ အ သင်း ရဲ့လူ စာ ရင်း က နေ ဖယ် ရှား ပြီး အ သင်း ကို သွေး သစ် လောင်း ခဲ့ ပါ တယ် ။
Dendi နေ ရာ ကို အ စား ထိုး ခဲ့ တာ က တော့ Mag i caL ပါ ။
သူ့ ရဲ့ က စား ဟန် တွေ ၊ ရဲ ရင့် မှု တွေ က Dendi ငယ် ရွယ် စဉ် က အ တိုင်း ပဲ ဖြစ် လို့ Na‘ V i ပ ရိ သတ် တွေ ရဲ့ မျှော် လင့် ချက် ရောင် ခြည် လေး ဖြစ် ခဲ့ ပါ တယ် ။
ဒါ ပေ မယ့် လည်း ပြိုင် ပွဲ အ နည်း ငယ် မှာ သာ လက် စွမ်း ပြ နိင် ခဲ့ ပြီး ရာ သီ တစ် လျှောက် လုံး မှာ တော့ ရုန်း ကန် ခဲ့ ရ ပါ တယ် ။
ဒါ့ ကြောင့် မ လို့ T I9ကို D i rec t I n v i teမ ရ ခဲ့ ပါ ဘူး ။
D P C E ven t တွေ မှာ စု ဆောင်း နိင် ခဲ့ တဲ့ D P C P o i n t တစ် ချို့ ကြောင့် Na‘ V i တို့ T I9ကို သွား ခွင့် ရ ဖို့ အ တွက် O pen Q ual ifier s က နေ တော့ စ က စား စ ရာ မ လို ခဲ့ ပဲ Reg i o nal Q ual ifier s ကို I n v i teရ ခဲ့ ပါ တယ် ။
T I9Q ual ifier က စား တဲ့ Na‘ V i ရဲ့ လူ စာ ရင်း က တော့ C r y s tal i ze, Mag i caL, B l i z z y , Zayac နဲ့ S o N Nei k o ! တို့ ပါ ။
C I S Reg i o nal Q ual ifier မှာ Na’ V i ရင် ဆိုင် ခဲ့ ရ တာ က တော့ Vega, W i n s t r i k e, Tea m E m p i re, Gambi t , Nem i gaGam i n g , F l y T o M o o n နဲ့ Tea m S p i r i t တို့ ပါ ။
အုပ် စု တွင်း ၇ ပွဲ ယှဉ် ပြိုင် က စား ခဲ့ ရာ မှာ Na’ V i အ နေ နဲ့ ၄ ပွဲ နိင် ၃ ပွဲ ရှုံး ဆို တဲ့ ရ လဒ် ကို ပိုင် ဆိုင် ခဲ့ တာ ကြောင့် P lay off အ ဆင့် ကို က စား ခွင့် ရ ခဲ့ ပါ တယ် ။
Na’ V i တစ် ခု ကံ ကောင်း ခဲ့ တာ က ဒီ C I S Q ual ifier က ပြိုင် ဘက် အ သင်း ၇ သင်း ထဲ မှာ အင် အား အ ကြီး ဆုံး ဖြစ် တဲ့ D P C Ran k i n g 13က Gambi t ဟာ ခြေ ချော် လက် ချော် တွေ ဖြစ် ပြီး G r o u p S tageမှာ ပဲ ပြုတ် ကျန် ခဲ့ တာ ပါ ပဲ ။
အဲ့ လို ပဲ ကံ ဆိုး မှု တစ် ခု အ ဖြစ် မ ထင် မှတ် ထား တဲ့ ဖြစ် ရပ် အ ဖြစ် Na’ V i P lay off R o u nd1 မှာ ရင် ဆိုင် ရ မယ့် Vegaက အုပ် စု ပွဲ ၇ ပွဲ လုံး ကို အ နိင် ယူ ပြီး ပြိုင် ဘက် ကင်း အ သင်း ဖြစ် နေ ခဲ့ တာ ပါ ။
P lay off မှာ တော့ Na’ V i တို့ Vegaကို တစ် ပွဲ ပဲ အ နိင် ရ အောင် က စား နိင် ခဲ့ ပြီး ၂ – ၁ နဲ့ အ ရေး နိမ့် ခဲ့ တာ ကြောင့် L o wer B rac ket ကို ရောက် သွား ခဲ့ ပါ တယ် ။
L o wer B rac ket မှာ တော့ E m p i reကို ၂ – ၁ နဲ့ အ နိင် ယူ ခဲ့ သ လို နောက် တစ် ဆင့် Vegaနဲ့ ပြန် တွေ့ ရာ မှာ လည်း ၂ – ၁ နဲ့ ထပ် အ နိင် ယူ နိင် ခဲ့ လို့ G randF i nal s ကို ပြန် တက် ခွင့် ရ ခဲ့ ပါ တယ် ။
G randF i nal s မှာ တော့ U p per B rac ket က နေ စောင့် နေ တဲ့ W i n s t r i keနဲ့ တွေ့ ခဲ့ ရ ပြီး လက် တ လော လက် စွမ်း တွေ အ ရ ရော ၊ B rac ket အ နေ အ ထား အ ရ ပါ Na’ V i က အောက် အ သင်း ပဲ ဖြစ် ခဲ့ ပါ တယ် ။
ဒါ ပေ မယ့် တ ကယ် လက် တွေ့ က စား ချိန် မှာ တော့ လက် ဖျား ခါ လောက် တဲ့ လက် စွမ်း တွေ နဲ့ Na’ V i က ၃ – ၀ ဆို တဲ့ ရ လဒ် နဲ့ အ နိင် ယူ ပြီး သူ တို့ အ သင်း နဲ့ ၂ နှစ် ကျော် ကွာ ဝေး နေ တဲ့ T I ကို အ ရောက် သွား နိင် ခဲ့ ပါ ပြီ ။
အဲ့ လို သွား ရောက် နိင် ခဲ့ ပြီး နောက် မှာ Na’ V i Fan တွေ ရော တစ် ခြား သူ တွေ အ တွက် ပါ မေး ခွန်း ထုတ် စ ရာဖြစ် ခဲ့ တာ က တော့ Na‘ V i ရဲ့ကျ ရှုံး မှု တွေ မှာ Dendi က အ ဓိ က တ ရား ခံ ဖြစ် ခဲ့ လား ဆို တာ ပါ ။
Dendi က အ တွေ့ အ ကြုံ ပိုင်း အ ရ မေး ခွန်း ထုတ် စ ရာ မ ရှိ ပေ မယ့် O ldP layer တစ် ဦး ဖြစ် တာ ကြောင့် New Metaတွေ နဲ့ အ လှမ်း ဝေး လာ သ လို နောက် ပေါက် P layer တွေ က သူ က စား တာ ကြည့် ပြီး တော့ ကြီး ပြင်း လာ သူ တွေ ဖြစ် တာ ကြောင့် သူ့ အ ထာ တွေ ကို လည်း ထုံး လို ကြေ ရေ လိုနှောက် ဖြစ် နေ ပါ ပြီ ။
ဒါ့ ကြောင့် ဘယ် လောက် ပဲ သံ ယော ဇဉ် တွေ ရှိ ခဲ့ ရှိ ခဲ့ အဲ့ ဒီ အ ပြောင်း အ လဲ က တော့ Na’ V i အ တွက် ရော Dendi အ တွက် ပါ ဖြစ် သင့် ဖြစ် ထိုက် တဲ့ အ ပြောင်း အ လဲ တစ် ခု ဖြစ် ခဲ့ တယ် လို့ ပဲ ဆို ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ခင် ဗျာ ။
နောက် ထပ် ထူး ခြား မှု တစ် ခု က တော့ Na’ V i နဲ့ အ ပြိုင် ၂ ၀ ၁ ၃ – ၂ ၀ ၁ ၅ ခု နှစ် ကာ လ တွေ မှာ အ ပြိုင် ကြဲ ခဲ့ တဲ့ A l l ian ceဟာ လည်း လူ ငယ် သွေး သစ် တွေ နဲ့ တူ T I9မှာ စောင့် နေ ခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဒါ့ ကြောင့် E G , O G နဲ့ L i q u idတို့ လည်း ရှိ နေ ခဲ့ တဲ့ T I9မှာ တော့ T I 1 , T I3, T I5, T I7, T I 8 ချန် ပီ ယံ အ သင်း တွေ ကို လည်း မြင် တွေ့ ခွင့် ရ တော့ ပါ ။
C h i naReg i o nal Q ual ifier မှာ လည်း T I2နဲ့ T I4ချန် ပီ ယံ အ သင်း တွေ ဖြစ် တဲ့ I G နဲ့ Newbeeတို့ လည်း ရှိ နေ ခဲ့ လို့ တ ကယ် လို့ အဲ့ ဒီ အ သင်း ၂ သင်း ထဲ က တစ် သင်း သာ T I9ကို အ ရောက် လှမ်း လာ နိင် ခဲ့ မယ် ဆို ရင် တော့ ဒီ နှစ် T I9က ပို မို ပြီး ပြည့် စုံ သွား မှာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ခင် ဗျာ ။
လော လော ဆယ် မှာ တော့ အ ကြာ ကြီး ပျောက် ဆုံး နေ ခဲ့ ရာ က နေ ပြန် ပေါ် လာ ခဲ့ ပြီ ဖြစ် တဲ့ Na’ V i ကို ပဲ ချီး ကျူး ရင်း …
NAVI GOES TO THE INTERNATIONAL 2019
The atmosphere & emotions of our Dota2roster after qualifying for The International 2019! Three cheers for our boys! 🙌 #navination https://youtu.be/v5833IrLdM8
Posted by Natus Vincere on Wednesday, July 10, 2019
Previous: ဗစ် တိုး ရီး ယား လေး အ တွက် အ များ ပြည် သူ လှု ဒါန်း ထား တဲ့ အ လှူ ငွေ စာ ရင်း ကို ပွင့် လင်း မြင် သာ စွာ ထုတ် ပြန်
Next: ဖုန်း မှန် ကွဲ နေ တာ ဆက် သုံး ရင် ဖြစ် လာ မယ့် ဆိုး ကျိုး တွေ